“Meel aad u qaxdaana ma jirto markaa walaalayaal waxaan idin leeyahay dagaalkaas joogiya.” Daahir Rayaale | Berberanews.com
Home WARARKA “Meel aad u qaxdaana ma jirto markaa walaalayaal waxaan idin leeyahay dagaalkaas...
“Meel aad u qaxdaana ma jirto markaa walaalayaal waxaan idin leeyahay dagaalkaas joogiya.” Daahir Rayaale
Hargeysa(Berberanews):- Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa Beelaha ku diriraya deegaannada Ceel-afweyn ee gobolka Sanaag ugu baaqay inay joojiyaan Dagaalka, isla markaana nabadda iyo Walaalnimada ku beddeshaan Cadaawadda ay dhexdooda ka abuureen. Md. Rayaale waxa kale oo uu ka hadlay sida qaddiyadda Somaliland dunida loogu iib-geyn karo.
Waxa uu Daahir Rayaale Kaahin sidaa ku sheegay hadal uu ka jeediyey Xaflad loo sameeyey Xuska 27-guurada ka soo wareegtay ku dhawaaqistii gooni-isu-taagga Somaliland oo xalay lagu qabtay Xarunta Madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa. Waxa uu tilmaamay Daahir Rayaale in Soomaalidu macno la’aan isku disho oo dhiig u daadiso.
“Halkan waxan kaga faa’iidaysan lahaa shaqaaqada Ceel-afweyn ka socota, dadkaa walaalaha ah ee is laynaya waxaan leeyahay, waxa Allah waxad isku dilaysaan waa micno darro’e dagaalkaas joojiya oo Ilaahiina u noqda oo nabad dadkiina ka dhiga, waxaan idin leeyahay dad sokeeye ah baad tihiin oo meel wada deggen, meel aad u qaxdaana ma jirto markaa walaalayaal waxaan idin leeyahay dagaalkaas joogiya.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale.
Mudane Rayaale, waxa ku dardaarmay in Madaxweynaha waqtigan la garab-galo, isla markaana horumarka Qaranku ku jiro Midnimada iyo wada-jirka Ummadda, waxaanu yidhi; “Waxa ugu weyn ee ay Somaliland ku hirgalayso ee ay wax ku noqonaysaa waa midnimada iyo wada-jirka umadda Somaliland wada leh ee u wada dhalatay, , annaguna horaan uga soo shaqaynay, madaxweynaha cusubna inuu taas ku shaqaynayo ayaan filayaa, taas sidaynu uga midho dhalin lahayn ayey ku xidhan tahay qaddiyaddeena iibkeedu ee aynu ku wada shaqayno oo ciddii marba xilka haysa aynu kala shaqeyno.”
Hadalka Mudane Daahir Rayaale Kaahin caawa jeediyey ee uu arrimahaas iyo kuwo kaleba kaga hadlay, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan hoose ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-
Previous article2 Ruux oo ku dhintay shuban-biyood ka dilaacay Gobolka Hawd
Next articleMaxkamadda Rafcaanka oo xukunkii ka dhintay Boqoe Buurmadow